Tun Tun's Photo Diary: February 2016
Semporna, Malaysia #3
2013-Mar-31, Semporna မှာ ဒုတိယမြောက်နေ.ပါ။ မနေ.တုန်းကလိုပဲ Sea Gipsy တွေ နေတဲ့ ရွာတွေကို ပဲ ပြန်သွားလည်မှာပါ။ အရင်ဆုံး မနက်စာစားဖို. လက်ဖက်ရည်ဆိုင် လို ဆိုင်မျိုးကို သွားရပါတယ်။ Semporna မှာ အစားအသောက်က ရွေးစရာသိပ်မရှိဘူး။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်ကတော့ နေ.တိုင်း ဟိုတယ်နားက လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ ပလာတာ နဲ. လက်ဖက်ရည် ပဲ စားတယ်။ တခြားဟာတွေဆိုရင် စားလို.ကောင်းမကောင်း မသေချာလို.။
at 2/27/2016 01:57:00 PM Links to this post 1 comment:
Labels: Malaysia, Portrait, Semporna
Semporna, Malaysia #2
2013-Mar-30, ပထမပို.စ် က အိမ်ပေါ် ဓါတ်ပုံတက်ရိုက် အပြီး၊ ကျွန်ေတာ်တို. Speed boat လေးနဲ. ခရီးဆက်နှင်ခဲ့ပါတယ်။ အမှန်တကယ်တော့ ကျွန်တော်က ဒီခရီးစဉ် အတွက် ဘယ်နေရာပြီးရင် ဘယ်နေရာသွားမယ် ဆိုတဲ့ Plan ကို သေချာ မသိဘူး၊ ခေါင်းဆာင်တဲ့ သူကိုလုံးဝ ပုံအပ်ပြီး သူခေါ်တဲ့ နေရာ ကို လိုက်သွားတာပဲ။ ဒီခရီးစဉ်က အရင်ခရီးတွေ နဲ. မတူပဲ တခါမှ မကြုံဖူး တဲ့ အတွေ.အကြုံတွေ ကြုံရတယ်။ ဥပမာ- Sea Gipsy တွေ နေတဲ့ နေရာ၊ Tourist တွေ အရောက်အပေါက်နည်းတဲ့ နေရာ သွားရတာ ဆိုတော့ ပိုပြီးတော့ စိတ်ဝင်စားဖို.ကောင်းတယ်။
at 2/24/2016 08:25:00 PM Links to this post No comments:
Labels: Landscape, Malaysia, Portrait, Semporna
Semporna, Malaysia #1
2013-Mar-29, ကျွန်တော်လေယာဉ်လက်မှတ် အချိန်မှား ၀ယ်မိလို. ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်း Tawau လေဆိပ် ကို အရင်ရောက်နှင့်တယ်။ Kota Kinabalu ကနေ Tawau ကို မိနစ်၄၀လောက် လေယာဉ်စီးရတယ်။ တခြား လူတွေက ည ၁၀ နာရီ လေယာဉ်နဲ. မှ ရောက်လာမှာ။ ကျွန်တော်က ဒီကို နေ.လည်ကြီးရောက်နေတော့ သူတို.ကို ၇ နာရီလောက်ထိုင်စောင့်နေရတယ်။ တောမြို. လေးရဲ. လေဆိပ်မို.၊ လေဆိပ်မှာ ဘာမှ လုပ်စရာမရှိဘူး။ စားသောက်ဆိုင် တစ်ဆိုင်မှာ Wifi ရလို. တော်သေးတယ်။ ည မှောင်လို. စားသောက်ဆိုင်လဲ ပိတ်သွားရော၊ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိလို. အပေါ်တက်လိုက်၊ အောက်ဆင်းလိုက် လုပ်နေရတယ်။
at 2/21/2016 04:09:00 PM Links to this post4comments:
Kota Kinabalu #4
2013-Mar-29, Kota Kinabalu မှာ တတိယမြောက်နေ.ပါ။ ကနေ. အစီအစဉ်ကတော့ နေထွက်တာကြည့်၊ မနက်စာစား၊ Monopiad Cultural Village ကိုသွား၊ ပြီးရင် Tawau မြို.ကို လေယာဉ်နဲ. သွားဖို.ပါ။ ပြီးရင် Tawau ကနေ Semporna မြို. ကို Taxi နဲ. သွားမှာပါ။
at 2/10/2016 11:59:00 PM Links to this post No comments:
Labels: Food, Kota Kinabalu, Malay Food, Malaysia, Sunrise
Kota Kinabalu #3
2013-Mar-28, Kota Kinabalu ရဲ. attraction တခုဖြစ်တဲ့ Filipino Market ကို သွားလည်ခဲ့ပါတယ်။ ရောက်သွားတဲ့ အချိန်က တော်တော်လေးကို နောက်ကျနေပါပြီ။ ည ၉နာရီ ကျော်လောက်မှ ရောက်သွားတယ်။ ဒါပေမယ့် ဈေးဆိုင်တွေ ဖွင့်နေတုန်းပဲ။
at 2/07/2016 03:19:00 PM Links to this post No comments:
Labels: Food, Kota Kinabalu, Malay Food, Malaysia
Kota Kinabalu #2
2013-Mar-28, Kundasang war memorial ကနေ Desa Dairy Farm ကို ဆက်သွားပါတယ်။ Desa Dairy Farm ဆိုတာကတော့ တောင်ပေါ်က နွားမွေးတဲ့ ခြံပါ။ နို.ထွက်ပစ္စည်းတွေ လက်လက်ဆက်ဆက် ၀ယ်လို.ရတယ်။ တောင်ပေါ်မှာ ရှိတော့ ရူခင်းတွေက စိမ်းစိမ်းစိုစို နဲ. နွားတွေ ၊ စားကျက်တွေ တွေ.ရတော့ မလေးရှား နိုင်ငံကလို. တောင် မထင်ရပဲ။ New Zealand လို နိုင်ငံမျိုးက ရူခင်းတွေ နဲ.တောင် သွားပြီး ဆင်နေသေးတယ်။ ကိုယ်တိုင် New Zealand တော့ မရောက်ဖူးပါဘူး။ ဓါတ်ပုံတွေ ကြည့်ပြီး ပြောတာပါ။
at 2/05/2016 02:17:00 AM Links to this post No comments:
Labels: Animal, Kota Kinabalu, Landscape, Malay Food, Malaysia